Kayse Abti-doon | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa qoraa ka tirsan Afrikaan. Qoraaga wuxuu wax ka qoraa aafooyinka haysta bulshada Soomaaliyeed sidda dhibaatooyinka qaadka, sigaarka iyo qabyaaladda. Wuxuu kalloo wax ka qoraa suugaanta, taariikhda Soomaalida, dhiirogelinta, caafimaadka, sheekooyinka madadaaladda iyo amuuraha ganacsiga.
Soomaalidu waxay lahaan jireen dhaqan soo jireen ah iyo Xadaarad farsamo oo ay ku maarayn jireen noloshooda bal aynu soo qaadano qaar ka mid ah Qalabbada ay ku farsamayn jireen gacantooda. – Weelka Soomaalidu waxay lahaan jireen weel ay gacantooda iyaga oo aan u baahnayn gacan shisheeye waxaana ka mid ah weelashaa:-  Kalax oo u kala baxa laba qaybood oo kala ah • Kalax Xaas iyo Kalax Aroos. Waxaana loo adeegsadaa cabitaanka. Haan oo ka koobnayd laba qaybood, inta dhexe oo qoriya inta danbe iyo furka oo toliin ah Xeedhooyin oo u qayb sama afar qaybood oo kala …
Ha seexan in ka baddan waqtiga qof kastaa hurdada u baahan yahay oo ah siddeed saac. Toos saacad go,an subax kasta, xataa haddii aad xilli dambe seexatay , isku dayna inaand ku noqon hurdada. Marka aad soo toosto waxaad furataa daaqadaha iyo daahyada ku gadaaman, si aad qorraxda u hesho isla markaana ay yaraadaan dheecaanadii hurdada keena , sida oo kale, isku day in aad dhawr daqiiqadood lugayso, waayo jimicsigu waa muhiim sidiisaba, , oo haddii aanad haleelin subaxdii jimicsiga isku-day in aad samayso galabtii ama habeenkii. Ha seexan in badan gelinka hore, haddii aad u baahan tahay xataa, …
Cunnista qaadku waxay burburisaa ilkaha iyo cirridka, taasoo dhibaato u keenaysa hawsha calaalinta iyo caafimaadka afka, waxay fududeysaa cudurrada faafa ee ku dhaca ilkaha iyo ciridka (Dental Caries and Periodontal Disease), cilmi baaris lagu sameyay dalka yemen oo lagu beegsanaayey 36 qof oo qabay kansarka afka ayaa waxay muujisay in 30 ka mid ahi dadkaasi ay si joogta ah qaadka u cunijireen. Waxa jira celcelis ay ilkaheenu cuntada ku calaalayaan tusaale; haddiiba maalinkii lagu qiyaasay celceliska ay ilkuhu wax ku calaaliyaan 1saac maalintii , nolosha aaddamuhu ay tahay sida caadiga ah 63 sanno qofka cunnaaya qaadka waxay ku qaadataa guud …
Shaqo marka laga hadlaayo waxa jira siyaabo aad ku abuuri karto waxaad ka shaqaynayso adigoon dhaqaale badan u baahanayn habab noocee ahbaan u abuuri karaa shaqada: 1. inaad koox wada guushaan 2. kaligaa adoon dhaqaale badan u bahnayn 3. iyo adoo aqoontaadu ku meel mariya waxad ka shaqaynayso Midmid aynu usoo qaadano oo aynu ka hadalno si faahfaahsan oo faaqadaysan,si aynu fahano siyaabaha ama tusaalooyin ayagana aynu daalacano oo daqaada aynu ka tiigsano dadka shaqada samaystay, Koox wada kasbada ama hela shaqo Hadaad hesho koox isku wada faker tahiin ama dad aad is qaabili kartaan, si aad u samayso ganacsi …
Soomaalidu waxay lahaan jireen dhaqan soo jireen ah iyo Xadaarad farsamo oo ay ku maarayn jireen noloshooda bal aynu soo qaadano qaar ka mid ah Qalabbada ay ku farsamayn jireen gacantooda. Soomaalidu waxay lahaan jireen weel ay gacantooda iyaga oo aan u baahnayn gacan shisheeye waxaana ka mid ah weelashaa:- Kalax : oo u kala baxa laba qaybood oo kala ah Kalax Xaas iyo kalax Aroos Waxaana loo adeegsadaa cabitaanka. Haan oo ka koobnayd laba qaybood, inta dhexe oo qoriya inta danbe iyo furka oo toliin ah. Xeedhooyin: oo u qayb sama afar qaybood oo kala ah. B) Xeedho …
Soomaalidu waxay gacantooda ku samaysan jireen guryaha ay ku noolyihiin kuwaas oo u kala bixi jiray seddex (3) guri oo kale ah. 1. Laba daryaale “Aqalka arooska” 2. Guri xaas “Aqalka shan iyo wixii ka badan ay ku noolyihiin” 3. Ganbis “ Aqal soomali u samaysan qaabka Mutulaha” Sida caadiga ah dhalinyarada iyo Raga xooga ahiba waxa ay seexan jireen ama ku cawayn jireen Ardaaga halkaasoo ay kagana warhayn jireen Reerka iyo Xoolahaba. Qalabka dhismaha aqal Soomaaliga Qalabka dhismaha ee Aqal Soomaaligu wuxuu ahaa mid ay dhamaantii farsameeyeen dadka Soomaalida ahi, iyaga oo aan waxba la soo daggin soona amaanaysan …
Somaalidu waxay ku maahmaahdaa ‘’daacadi ma hugoowdo,, oo haddiiba aad tahay qof caan ma waayaysid cid ku xumaysa , oo illaahay adoomahiisa waa imtaxaamaa sidday ukala ajar badanyahiin , si loogu siyaadiyo camalkooda ay shaqaysanayaan qisadan illaa akhriso ku dhacday Imaamu Shaafici (raxmadi korkiisa ha haateeImaam Shaafici, goor ay Subax ah, isaga oo la jooga Ardaydiisii, ayaa waxaa u timid Haweeney yuhuudiyada waxayna ku tiri Imaam, habeenkiina zino, Subixdiina Khudbo, (yacni Habeenkiina waad ila Seexaneysaa oo waad iga Zinaysaneysaa, malintiina ardayda iyo Dadkaad u khudbeyneysaa) Ardaydii dhammaan waxey wada egeen Sheekha iyaga oo ka sugaaya inuu ka jawaabo oo …
Maalin Ku Dagaalan Iyo Goorna Ku Dirir
Hadiiba uu hele ruuxa Soomaaliga maalintaa lacagtii uu ku qayili lahaa waa ay u dhantahay aduunkii oo dhami oo maalintaasii waxa uu dadka kasareeye inta geelu dadka ka sareeyo si kastaba ha haatee , dadka raadsada caleenta qaadka ma laha qorsheyaal iman doona kolba halkay lacagta Qaadka kasoo saaranbay ku dadaalaan. Somalida haddii aad u fiirsato, waxaad is odhanaysaa waa meesha keliya ee caalamka aanay ka shaqayn ama ka jirin shalay, maanta iyo berri. Shalay haddii aanay jirin oo aan laga faa’iidaysan, maanta lama garto ama ma jirayso. Maantana marka la garto sidii ay ku timi, waxa lagu guulaystaa berrito …
waxan xasuustay xikmad uu ka hor akhriyey Golaha Jaamacadda Yale sannadkii 1913-kii oo uu qoray abwaanka suugaanta Ingiriiska Thomas Caryl, xikmadaas oo leh; waxba ha ka walbahaarin yididdiilooyinka fogfog ee sheeda ka muuqda ee aan u hanqal-taageyno, waxaase waajibku yahay inaan ku dhaqaaqno waxa gacanta innoogu jira markaas. Anigoo dhinac kasta ka eegaya, xooggana saareyna sidaan u fulin lahayn, waxaanna hubaal ah in arrimaha soo socda xal loo heli doono waqtigooda. Bal eeg xikmadan yaabka leh iyo xaqiiqada ku jirta sida runta ah waxa mabda’ istaahila in la xafido oo lagu dhaqmo, ardaygii cabsanayey sidaas ayuu ku galay imtixaankii kuna …
Sideedaba waxaynu iskaga noolnahay waxa dibada laga soo waarido oo aynaan waxba ku lahayn haba yaraatee, waana dhibta haystana Soomaalida iyo Afrikaankaba in loogu keeno gargaar wadamada hurumaray iyagoo wadamadooda ka soo saran kara waxaa loo keenayo. Caasimadda dalka Saambiya ee Lusaaka marwo dhaqaalayahan iyo qoraaba ah oo u dhalatay dalkaas Dambisa Moya, ayaa soo saartay 2009 buuggeeda (the Dead Aid) gar-gaarkii dhintay ayadoo kaga hadlaysa dhibta uu ay leedahay gar-gaarka shisheeye oo taageeraysa gargaarka sokeeye. Hadaba gargaarka Shisheeye Muxuuna u Shaqayn waayay? “Why Aid is not Working?” Waxa ay qoraa Moya u haysaa warcelin ku qotonta qodobbadan: Waxa uu …